Mep makta nchekwa data maka WordPress na sava weebụ gị, yana onye ọrụ MySQL nke nwere ihe ùgwù niile maka ịnweta ma gbanwee ya.
Ihe Nlereanya: Dokáže se také stát iWunye WordPress on-na-elekọta weebụ gị naanị ole na ole na iji iji Autoinstalační program hostinger (dále jen Hostinger ebe a).
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’toge ederede bụ ụdị 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg d on ka onye edemede ederede. Gutenberg na eweta mgbanwe dị ukwuu na nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ on ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Obvykle známí také na njikwě okirikiri ederede.
Site na ntinye nke Gutenberg nchịkọta akụkọ na WordPress 5.0, ndị na-ede blọgụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya ugbu site on iji nchịkọta akụkọ na-egbochi ngọngọ. Stránka na ndabara, WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. Webové stránky ịgbakwunye na pluginy Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe nd aka akazọ na – etinye aka (d FAQka ọmụmaatụ – FAQ, akordeon, profaịlụ edemede, kolotoč, pịa-to-tweety, GIF bloky, wdg) na blog gị.
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma maleite on blog dabere na ya, mgbe nke ahụ daa on ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "mgmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa on ejiji, blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Měli bychom se podívat na to, že jsem isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
Mgbe iwu ọzọ (ị bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Relevance bụ isi ebe a.
Enwere ọtụtụ nyiwe ebe ị nwere ikemalite blog efu taa, nke a g Wordnyere WordPress.com, Tumblr ma ụ bụ Blogger. Iji mepụta blog n’efu, he ga – eme bụ ịdebanye aha ma ị nwere ikemalite ibipụta ọdịnaya gị.
O nweghị ihe na-abịa n’efu n’ụwa anyịị. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
Ana m ro aro ka ị malite blog gị site on iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri on ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gw nwere enweghị njedebe.